Matetika ny volana isam-bolana dia lasa fotoana sarotra ho an'ny vehivavy iray. Ny fihenan-dra, ny fanaintainana, ny fiovan'ny hormonal habaka mahazatra - izany rehetra izany dia tsy ny fomba tsara indrindra hiankina amin'ny toe-tsaina sy ny fahatsarana. Amin'izao fotoana izao, te-handry ianao, manenina ny tenanao, manembona ny tenanao amin'ny zavatra iray. Fa afaka mandeha any amin'ny gym miaraka amin'ny isam-bolana sy lamasinina ve?
Amin'ny vanim-potoanan'ny reny, ny vanim-potoana sarotra dia matetika amin'ny voalohany. Noho izany, ny fanontaniana raha azo atao ny mampiofana amin'ny andro voalohan'ny fadimbolana, dia tsara kokoa ny mamaly amin'ny fomba ratsy. Ilaina ny manome vatana farafaharatsiny mba hanangonana hery.
Afaka mampiofana mandritra ny fadimbolana ianao raha tsy mahatsapa fanaintainana mafy na tsy fahampiana ny vehivavy. Kanefa ny fiantraikan'ny fampiofanana dia tokony hampihena farafahakeliny amin'ny fahatelo. Ny organism amin'izao fotoana izao dia mbola tsy "amin'ny tenany ihany".
Amin'ity indray mitoraka ity, mila misaintsaina tsara ianao rehefa misafidy ny fampiharana mifanaraka amin'izany. Ny fiofanana mandritra ireo volana ao amin'ny gym dia tokony hitandrina tsara. Avy amin'ny enta-mavesatra, dia aza misalasala mandà. Ny fanatanjahan-tena amin'ny aerôbika dia tena sarotra toy izany koa amin'izao fotoana izao: ny rà dia marefo amin'ny erythrocytes, ary ny fahatsapana dia tsy mahafinaritra indrindra. Fa afaka manao izany ianao kely, tsy misy ny tsy fahasalamana.
Saingy tsy azo atao ny manangona ny gazety: tsy maintsy hitarika rà mandriaka kokoa izany, izay mety hitarika ho amin'ny olana eo amin'ny vehivavy izany amin'ny hoavy - ohatra, amin'ny endometriozy.
Ny fandehanana amin'ny fampakaram-bady mora dia manampy tokoa ny fanaintainana ary noho izany, ny mifanohitra amin'izany aza dia azo atao mihitsy ny manolo-tena amin'ny fotoan-tsarotra . Esory ihany koa ny fanaintainana dia hanampy amin'ny fanatanjahan-tena.
Ahoana raha te hanohy ny fianarany ny vehivavy na dia mandritra ny fotoana fadimbolana aza?
Raha manapa-kevitra ny tsy hampiofana fiofanana ny vehivavy iray, dia ilaina ny mampihena ny enta-mavesatra sy ny hamafin'ny fianarana, ny halaviran-dàlana dia tokony ho maivana, ny fahazavan'ny akanjo, ary ny efitrano feno satroka. Mandritra ny fadimbolana, ny fatiantoka dia mahery kokoa noho ny amin'ny andro ara-dalàna, ary ny fitomboan'ny rivotra madio dia avo kokoa. Raha matevina ao amin'ny efitrano fampiofanana izy dia mety ho lasa tsy misy dikany ilay zazavavy.
Na izany aza, ny fanontaniana fotsiny raha mety ho an'ity tovovavy ity ny manofana mandritra ny vanim-potoana, dia afaka mamaly ny dokotera ihany. Misy fanoherana mazava. Ohatra, ny vanim-potoan'ny fahamaotinana. Amin'ity fotoana ity, tokony haka ny "iray volana" ianao, raha tsy izany dia tsy voatery hisaina tsara ny fampiofanana amin'ny fananganana ny vatan'ilay tovovavy.
Ny fanafody dia mampiharihary toy ny mahazatra antsika toy ny fanosihosena sy ny hafa, eny fa na dia kely ihany aza, ny trangam-pandrenesana amin'ny fiterahana, na ny otrikaretina vao nafindra.
Raha toa ka mitebiteby ilay tsingerina, raha toa ka mahatsiravina na maharary isam-bolana, angamba, tsara kokoa ny manolo-tanana ny fampiofanana.
Tsy afaka mandray anjara ao amin'ny toeram-pisakafoanana ianao ary avy hatrany aorian'ny fanalàn-jaza - hatramin'ny volana manaraka.
Noho izany, ny fitsipika ho an'ireo te-hiditra ao amin'ny gym nandritra ny fadimbolana.
Aza mihoatra ny vatanao.
Miangavy ny hanao akanjo malefaka, mahaleo, ary mazava.
Ilaina ny misafidy efitrano misy rivotra tsara.
Mitondrà rano iray tavoahangy miaraka aminao: ny tsy fahampian-drano dia mifanohitra amin'izany andro izany!
Atombohy amin'ny famolavolana.
Raha mbola manam-pahefana ianao, dia afaka miezaka kely fotsiny ianao.
Ny fampiofanana tsara indrindra amin'ity toe-javatra ity dia mandeha, mihazakazaka haingana, mandeha bisikileta, milomano na aqua aqua.
Ireo izay manaraka ny soso-kevitra nosoratana etsy ambony dia ho afaka hampihatra tsara sy azo antoka mandritra ny fampiharana mandritra ny vanim-potoana. Zava-dehibe ny manaraka ny fitsipika mba tsy hanimba ny vatanao ary tsy hanimba ny fahasalamana. Ny zava-dehibe dia ny fampiharana tsy maintsy atao amim-pilaminana sy am-pahamendrehana, tsy misy haingana, tsy misy manelingelina na aiza na aiza.
Ahoana no hanafoanana mpifaninana iray?
Inona no holazainao amin'ilay tovolahy?
Ahoana no ahitanao ny antsasany hafa?
Inona no manentana lehilahy, inona no fihetsika?
Avy amin'ny fitiavana mankahala ...
Inona no hitan'ny lehilahy amin'ny voalohany?
Ny dikan'ny hoe kisses
Ampahany tsara amin'ny vatan'ny vehivavy
Ahoana no itiavana ny fitiavana?
Fomba 10 Hanimba ny Fanambadianao
Ahoana ny fialana amin'ny sigara?
Nipoaka i Nicky Minage sy Mick Mill!
Mpilalao 7 avy amin'ny "Game of Thrones", izay efa hitanao tao amin'ny "Harry Potter"
Ireo kintana nanatrika ny hetsika Vogue Fashion Fund
Ahoana no fomba hisintonana an'i Smesharikov?
Diabeta miaraka amin'ny fitezan'ny liona
Ahoana ny fomba hanamboarana akoholahy ao an-trano?
Herinandro 26 bevohoka - fotoana firy izao?
Inona ny nofinofy amin'ny fararano?
Inona no miaro ny Ikotok'ilay Renin'ilay Andriamanitr'i Ostrobram?
Porosaina ho an'ny etona
Ny fanafody fanafody dia ny zava-mahadomelina mahomby indrindra
Sofa mivantana ho an'ny lakozia
Sofa tsy misy fitaovam-piadiana
Alika milonona ho an'ny ririnina